Accueil > Gazetin'ny nosy > FIANGONANA LOTERANA MALAGASY : Mila fandiovana
FIANGONANA LOTERANA MALAGASY : Mila fandiovana
Ny Fiangonana dia toy ny rafitra misy rehetra koa tsy atao mahagaga raha misy ireo mpino no mihevitra fa misy ny fandiovana na atao hoe koa fanatsarana ny zava-misy ao anatiny. Eto dia tsiarovana ny voalaza ao amin’ny boky masina ao amin’ny Estera 8.6: milaza hoe“HATAOKO AHOANA NO FIJERY NY LOZA HANJO NY FIRENEKO?”Marary ny Fiangonana Loterana Malagasy amin’izao fotoana izao noho ny afitsoka nyMpitondra azy ka manomboka amin’ny Filoha faratampony izany hatrany amin’ny Filohan’ny Sinodam-paritra. Maro no zavatra iainan’ny kristianina ao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) izay tsy zakan’ny vavoninay intsony izay sady tsy ara-tsoratra masina no tsy araka ny Lalàmpanorenana sy ny Fitsipika manan-kery.
Ny fiheveran’ireo mpitondra amin’ny Birao Foiben’ny FLM sy ny ao amin’ny Sinodam-paritra fa dondrona sy tsy mahafantatra na inona na inona ny vahoaka kristianina fa izy ireo no nianatra sy nandalina ny Baiboly ary feno Fanahy Masina ka heverin’izy ireo tahaka ny “MOUTONS DE PANURGE” ny mino ka manaraka ambokony fotsiny mandre ny toriteny tsara lahatra ary variana amin’izany ny mino ka tsy afaka handinika lalina ny zava-misy iainany. Mamaky Soratra Masina ny mino kristianina ka fantany izay voasoratra na amin’ny fiteny inona no ao. Ireto misy voasoratra azo dinihina tsara. Ao amin’ny Filazantsara : “ LIOKA 19.46 : “Tranoko dia trano fivavahana, fa hianareo kosa manao azy ho zohy fieren’ny jiolahy”- MARKA 7.7: “Koa foana ny ivavahan’ireo amiko”- MATIO 23.23-24-25: “…Ry mpitarika jamba, tatavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva”; Andininy26: “Ry Fariseo jamba, diovy aloha ny atin’ny kapoaka sy lovia mba ho madio koa ny vohony”; Andininy 27: “Lozanareo…mpihatsaravelatsihy fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy, izay miseho ho tsara tarehy ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolan’ny maty, mbamin’ny fahalotoana rehetra”; Andininy28: “Dia tahak’izany koa ianareo raha eo ivelany dia miseho amin’ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fihatsaram-belatsihy sy tsy fankatoavan-dalana”.
Mampalahelo ny aim-panahin’ny mino izay mankany amin’ny fangatsiahana tanteraka raha tsy misy vahaolana haingana izao toe-javatra mampalahelo izay miseho isan’andro ato amin’ny Sahan’ny FLM ka tsy maintsy avoaka ny marina ary ananana porofo mazava.
1) Ny KMSL Komity Mpanatanteraka Sinoda Lehibe nivory tamin’ ny volana May 2016 tao Fianarantsoa dia nanehoana ny tsy fahamarinana rehetra mikasika manokana ny Filohan’ny FLM, satria tsy te-hampiasa ny fahamarinana Atoa Rakotonirina David, na amin’ny tenany na amin’ny fomba itondrany ny FLM, nefa afenin’ireo mpikambana rehetra ao amin’ny KMSL izany ka indro avoaka etoana ny marina. Noho izany ny Fiangonana dia mitady olona madio sy matahotra an’Andriamanitra satria masina sy madio Jesosy Kristy ilay Andriamanintra. Indro avoaka etoana ny tatitra tamin’izany fivoriana natao tao Fianarantsoa izany. Tamin’ny 05 Janoary 2016 mitondra ny Arreté n° 001/Aj/2016/001/IST/16/CF sy Fanapahan-kevitra laharana-O85-MID/SG/DAGT/DIE/SCE tamin’ny09/05/16. Niharan’ny “IST” na tsy mahazo mivoaka ny sisin-tanin’i Madagasikara ny Filohan’ny FLM Atoa Rakotonirina David, fa nisy raharaha mahavoa saringotra azy ara-politika. Noho izany dia tsy madio Atoa Rakotonirina David. Menatra sy afa-baraka ny FLM.
2) Voaresaka koa tamin’izany ny momba ny naha-Talem-pitantana ny Seminera Teolojika tao Antsirabe Atsimo Avoko tamin’izy “nanao fifanekena na fifanarahana ara-barotra an-tsokosoko tamin’ny Orin’asa MALOCI momba ny fivarotana POSOLAN teo amin’ny tanin’ny FLM akaikin’ny STPL” ka ny vola voarainy tamin’izany dia tsy niditra tao anatin’ny kitapom-bolan’ny FLM na iraimbilanja aza. Niakatra Fitsarana mihitsy ny raharaha ka mbola mihantona hatramin’izao. Tena mahasahy maty mihitsy io Filoha io rahefa resaka ara-bola! Voaresaka tamin’izany fivoriana izany koa ny diploma “Honorary Doctorate” avy amin’ny Nigaro Lutheran Theological Institute” izay tsy nahazoany fankatoavana na “accréditation” avy amin’ io Institut io. Nangataka Atoa Rakotonirina David, Filohan’ny FLM “équivalence administrative” tamin’ny 27 Aprily 2016 miaraka amin’ny Arrêté n° 10307/2016-CNEAT ka tsy nanaiky izany ny tao amin’ny ministeran’ny Asam-panjakana Malagasy satria sandoka ilay diplaoma nefa mbola nanohy hatrany izy mampiasa ny titre maha“Docteur”azy. Tamin’ny Novambra 2016 dia tonga teto Madagasikara ny Mpanjakan’i Maroka ka tonga teo ny Filohan’ny FLM Atoa Rakotonirina David nitsena teny azy Ivato. Marihina fa nitondra ilay “LA CROIX” lehibe teny ambozony ka manambara ny maha Evekan’ny FLM azy. Tsy misy izay maharatsy izany fihetsika nataony izany saingy mipetraka ny fanotanian’ny rehetra :Inona moa no ifandraisan’ny Mpanjakan’i Marokanina amin’ny FLM, indrindra amin’ny lafin’ny finoana ? Na inona na inona antony dia tsy mbola nisy fanazavana azon’ny mpino momba izany. Izay mila porofo mikasika io fitsenana io dia iangaviana hijery ireto porofo ireto: https://www.youtube.com/watch, manomboka eo amin’ny faha 29 minitra sy 15 segondra, fa hahita zavatra ianareo. Mampieritreritra lalina ity fifandraisana ity. Anisan’ny nolavin’ny KMSL tany Fianarantsoa koa tamin’ny volana May 2017 ny “Exploitation Ethanol” ao Antsirabe. Nisy fifanarahana tsy mazava loatra tamin’ny FLM nataony tany La Réunion. Atoa Rakotonirina David , Filohan’ny FLM am-perin’asa izao no nanao an’izany.
Tsy vitan’izany ary tsy hadino fa mahamenatra ny zanakin’ny FLM “ny nandraisan’Atoa Rakotonirina David ny vola sy ny fiara tsy voazavany avy amin’Atoa Praiministra teo aloha Mahafaly Olivier”. Indrindra moa amin’izao fotoana misy ny ampamoaka maro miseho izao. Maro tsy voatanisa etoana avokoa ny kolikoly avo lenta sy fahotàna vitan’ireo Filohan’ny FLM teo aloha sy ankehitriny izay havoaka eto amin’ny manaraka. Ho fehiny ny androany ary mbola hitohy ny tantara dia tsy maintsy avoaka ny marina rehetra izay ahitana sy ananana porofo mazava amin’ny habibiana sy hadalana ary tsy fahatahorana an’Andriamanitra ataon’ireo Filohan’ny FLM nifandimby sy ny ankehitriny. Amin’ny fandalovan’i Papa Ray Masina eto Madagasikara izay rain’ny kristiana rehetra dia samia mibebaka isika rehetra. Hianareo delegasiona avy amin’ny Fiombonamben’ny Fiangonana Loterana eran-tany avy any Genève izay ho tonga eto Madagasikara ato ho ato, raiso ny andraikitrareo fa betsaka ny zavatra tsy manjary sy mamohehitra ato amin’ny FLM. Ho anareo rehetra mpitondra sinodam-paritra dia mibebaha haingana fa iray petsapetsa sy tsikombakomba (complice) amin’ireo Filohan’ny FLM nifandimby teo mpanao kolikoly avo lenta ianareo ary miomana fa hiara-hibaby ny vokatr’izany ianareo, Indrindra ny fivarotan-tanin’ny FLM niarahanareo nanao, sns…Ho anareo mpikambana kristianina izay miaro an’ireto olona manao tsy mety ireto, mba tsy hiakaran’izao raharaha izao amin’ny Fitsarana dia mba matahora ihany fa tsy maintsy misy ny farany. Satria hianareo miray tetika no fahavalon’ ny FLM. Ireo Mpitondra Fanjakana izay ekenay sy inoanay fa kristianina koa mba raiso ihany nyandraikitra nomen’ny Tompo anareo fa misy zavatra tsy milamina sy misy kolikoly avo lenta ao amin’ny FLM Foibe sy ny rantsa-mangaika rehetra ao amin’ny FLM.Izany no hatao satria mambotry ny Fiangonana sy ny Firenena ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Tsy finiavana hanasoketa na handoto olona no anaovana izao lahatsoratra izao fa kosa adidy eo amin’ny filazana ny marina mba hahazoana miditra amin’ny tsaratsara kokoa hialàna amin’ny fahalovana.